पशुपतिमा सपनाको नाम लिदै डाको छोडेर रो, ए बिनय जंग (भिडियो सहित) – Ap Nepal
March 18, 2021 872
काठमाण्डौ । बेवारिसे व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष विनयजंग बस्नेत र सपना रोका मगरबीचको सम्बन्धको बारेमा यतिबेला सामाजिक सञ्जालहरुमा निकै नै खै ला बै ला म च्चि रहेको छ ।
सपना र विनजंग अलग भएदेखि नै यिनीहरुको सम्बन्धमा विभिन्न खाले प्रश्नहरु उठ्दै आईरहेको बेला सपनाका आमाबुवाले नै विनयजंगकै कारण सपना विनयजंगबाट टाढीएको बताएपछि सामाजिक सञ्जालमा खैलाबैला म च्चि एको हो ।
जब सपनाको आमाबुवा एकै साथ मिडियामा आएर विनयजंगले छोरी भन्ने नाम दिएर छोरी सपनालाई यौ ’न दु’ व्र्य ’वहा’रहरु गर्ने प्रयास गरेको अभिव्यक्ति दिएका थिए । उत आफु वि रु द्ध सपना र उनका आमाबुवाले लगाएको आ’रोप हरु सुनेर विनयजंग भने अचम्मित परेका थिए ।
उनको भनाई अनुसार सपना र उनका अभिभावकले यस्तो आ’रो’ प लगाउन सक्छन् यो उनको कल्पनाभन्दा परको कुरा थियो । चारैतिर आफुवि ‘रु’द्ध सञ्जालहरु खनिएपछि विनयजंगले आफ्नो र सपनाकोबीचको सम्बन्धको विषयमा बोलेका छन् । उनले सपनासंग भेट भएदेखि छुट्टी दासम्मको एकएक पलका कुराहरु गरेका छन् । विनयले सपनालाई छोरीकै दर्जामा राखेर व्यवहार गरेको बताएका छन् ।
उनी भावुक हुँदै भन्छन्,‘सपनालाई मैले जुनदिनदेखि भेटे उस्लाई मैले केवल छोरीकै नजरबाट हेरें । तर आज मलाई नै यस्तो घि’नला’ग्दो आ’रोप उस्ले र उस्को परिवारले लगाउलान् यो मेरो सोचाईभन्दा परको कुरा थियो । गल्ति मिले गरे आफ्नो मान्छेलाई पर राखेर परको मान्छेलाई नजिक ल्याउनु मेरो ग ल्ति भयो भन्दै भक्कानिएर रोए ।
Prevहे दैव..शिशिर भण्डारीले सबैलाई हात जो डेर बिन्ती गरे । यस्तो त श’त्रुलाई पनि नहोस । सबैले यो भिडियो हे, र्नुहोला
Nextअमेरिकामा एक नेपाली ड्राइभरलाई बलिउड अभिनेता अनुपम खेरले गरे सम्मान (भिडियो सहित)
सुनका गहना जोड्ने सोचाइमा हुनुन्छ ? आज बढ्यो सुनको मुल्य तोलाको कति पुग्यो त ?
२ महिनापछि सामाजिक सञ्जालमा समीक्षा अधिकारी, भन्छिन् “तिम्रा लागी सधैँ म हार्न सक्छु ” हेर्नुहोस् स्टाटस्